Sudan oo laga saarayo liiska argagixisada Mareykanka, balse lagu xiray lacag malaayiin dollar ah – Calanka.com
Sudan oo laga saarayo liiska argagixisada Mareykanka, balse lagu xiray lacag malaayiin dollar ah
in Dibedda — by admin —	October 20, 2020
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Suudaan uu ka saari doono liiska dowladaha taageera argagixisada haddii ay bixiso magdhow dhan 335 milyan oo doolar.
Ka saarista Suudaan liiska madow waxay noqon doontaa war aad looga soo dhoweeyo dalka, halkaas oo cuntada, shidaalka iyo daawadu ay qaali yihiin oo ay gabaabsi yihiin, Tifatiraha ku xigeenka Afrika Anne Soy ayaa werisay.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu Donald Trump sidaan ku yiri: “War wanaagsan! Dowladda cusub ee Suudaan, oo horumar weyn sameyneysa, waxay ogolaatay iney 335 MILYAN siiso dhibbanayaasha argagixisada Mareykanka iyo qoysaska.
“Marka la ii shubo lacagtaas, waxaan ka saari doonaa Suudaan liiska dowladaha taageera Argagixisada. Ugu dambeyntiina, waa caddaaladda dadka Mareykanka ah iyo tallaabo weyn oo loo qaado Suudaan!”
Wax yar ka dib Markii Trump qoraal ku soo bandhigay Tweeterkiisa ayaa Mr Hamdook wuxuu ku dhawaaqay in lacagta horay loo wareejiyay, taas oo ku sheegay war laga sii daayay Telefishinka dowladda
Waxaa uu sheegay in tallaabadani ay calaamad u ahayd “shuruuddii ugu dambaysay ee lagu sugayay Suudaan si loooga saaro liiska madow.
Mr Hamdook wuxuu sheegay in Suudaan ay rajaynayso wargelinta rasmiga ah ee ka imanaysa mas’uuliyiinta Mareykanka.
Toddobadii bishii Ogoosto sanadkii 1998-kii, gawaari lagu soo rakibay walxaha qarxa ayaa isku mar isku qarxiyay bannaanka safaaradaha Mareykanka ee Nairobi iyo Dar es Salaam.
In kabadan 200 oo qof ayaa ku dhintey caasimada Kenya halka ugu yaraan 11-na ay ku dhinteen Dar es Salaam, oo ah caasimadda dalka Tanzania. Kumanaan qof oo kale ayaa ku dhaawacmay qaraxyada.
Dadkaas badankoodu waxaa ay ahaayeen dad rayad ah .